Japàna: Ilay Andro Tsy iantsenàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2017 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Español, Aymara, English
ny Andro tsy iantsenàna tao Japàna
Tamin'ny 1992, i Ted Dave, mpanakanto tao Kanadà no nanomboka ny Andro tsy iantsenàna izay nitatra tany aminà firenena maherin'ny 60 manerana ny tany, isan'ireny i Japàna.
Mifanaraka tsara amin'ny filozofian'ilay hetsika, ny Sabotsy 28 Novambra 2009 ry zareo Japoney dia nasaina mba hijanona tsy hiantsena ary handinika ny fahazàran-dry zareo manjifa tsy am-piheverana.
Inona no ambaran'ny fanambaràna momba ny tanjon'ny Andro Tsy iantsenàna [ang.] ?
Mampiato kely ny fahazarana isanandro amin'ny famokarana-fanjifàna. Mitady fomba hafa hanoloana ny fomba fiaina mifantoka loatra amin'ny fandehanana miantsena. Misarika ny saina ho any amin'ny fiantraikan'ny fanjifàna tafahoatra eo amin'ny lafiny sosialy, toekarena, tontolo iainana ary ara-tsaina. Mampiroborobo ny toekarena manaja ny tontolo iainana (orinasa eo an-toerana no sady mandray andraikitra ara-tontolo iainana, ireo tondro maneho ny fananana harena ankoatra ny harinkarena faobe).
Andro Tsy iantsenàna 2009 PV avy amin'i Illcommonz
Manerana an'i Japàna, maro ny olona sy fikambanana mikarakara hetsika hanairana ny olona momba ireo olana mifandray amin'ny fahazarana manjifa tsy am-piheverana / tsy tomponandraikitra.
Ikuko, mpikambana ao anatin'ilay tarika mpankanto NU★ie, milaza fa hikarakara atrikasa iray ao Sapporo ry zareo, any amin'ilay nosy farany avaratra ao Hokkaido. Ny iray amin'ireo atrikasa, ohatra, dia hifantoka amin'ny famokarana zavatra tena ilaina amin'ny alàlan'ny famerenana manodina ireo vokatra nahilika tsy ho ampiasaina intsony.
Famokarana be dia be, fanjifàna be dia be. Fotoana iray tsara fanararaotra izao mba hamerenantsika mandinika, na ho indray mandeha isantaona monja aza, ireo fahazarantsika eo amin'ny fiainana ka mahatonga ny fanjifàna ho toy ny zavatra mandeha ho azy.
‘Andro iray izay tsy hividianantsika zavatra tsy dia ilaina = Andro Tsy iantsenàna’
Ity hetsika ity, izay nipoitra avy any Kanadà, dia lasa hetsika mitranga manerana izao tontolo izao aminà fotoana iray mitovy !!
Nihevitra izahay ny hanao zavatra ao Sapporo ihany koa, araka izany dia nanapaka hevitra ny hikarakara hetsika iray!
“Andro Tsy iantsenàna : andro fialantsasatra iray ho ankafizina malalaka”
Ilay bilaogera, zawasawa, misaintsaina ny hevitry ny teny hoe “kolontsaina” sy izay iarahan'ny rehetra miantso hoe vokatra ara-kolontsaina .
Efa mahazatra antsika izao ny mividy betsaka ny fialambolintsika, izay antsoina hoe “vokatra ara-kolontsaina”, toy ny fahitalavitra sy ny sisa, vokarin'ireo matianina amin'ny indostrian'ny fialamboly. Mpanjifa manara-drenirano fotsiny isika, na raha tsaratsara kokoa, mpandray anjara. Vidiantsika ny CDs, jerentsika ny sarimihetsika ary andraisantsika anjara ireo hetsika fanaingoana sehatra. Toy ireo ozinina mpamokatra kiraro, dia mamokatra “kolontsaina” i Hollywood sy Nintendo ary mandroso azy ireny ho antsika.
Kanefa, tsy izany no “kolontsaina”, tsy vokatra avy amin'ny indostria io. Raha miverina mijery ny tantara isika dia afaka hahita fa ny “kolontsaina” dia zavatra mifanohitra amin'izany, zavatra noforonina sy natsangan'ny olona toa antsika ihany nandritry ny fifandimbiasan-taranaka marobe.
Andro Tsy iantsenàna 2009 PV- MBOLA VELONA FOANA VE ? an'i Illcommonz
Nandritra ny Andro Tsy iantsenàna tamin'ny 2007 tao Kyoto, nisy andianà japoney mpanakanto notarihan'ilay mpikatroka sady mpamokatra sarimihetsika Illcommonz (イルコモンズ) namokatra fanadihadiana fohy izay lasa toy ny aingampanahy ho an'ny hetsika manohitra ny fanjifàna tsy am-piheverana, nomena lohateny hoe 無買日 京都 二〇〇七(Mubaibi Kyoto 2007, Andro Tsy iantsenàna Kyoto 2007).
Ambangovangony – Hitan'i Illcomonz ny dokambarotry ny Sampana Mpikarakara ny Varotra avy amin'ny magazay Marui ho an'ny karatra famàhana navoakan-dry zareo, manao hoe “izay vidianao no mamaritra ny maha-ianao anao”. Tezitra mafy tamin'io tenifaneva io izy, ary nieritreritra hoe “Mety ve izao ? Faniratsiràna ny dikany atao hoe maha-olombelona io dokambarotra io !” ary dia nanapaka hevitra izy ny handray anjara amin'ilay hetsika isantaona ” Andro Tsy iantsenàna” karakarain'ireo Mpandrava Doka mandritry ny vanimpotoanan'ny Noely.
Nirotsaka an-tsehatra namorona ny afisiny azy manokana izy ary nametraka ireo lahatsary tao amin'ny Youtube. Manamboatra ihany koa sariolona rakofana tapakila nandoavana vola izay “vatom-pifidianana arotsaka isanandro ho an'ny kapitalisma”. Saingy tsy mbola tony mihitsy ny hatezerany ka isantaona izy dia mandray anjara amin'ny ‘Fandinihantenan'i Dadabe Noely’, hetsika atao manoloana ny toeram-pivarotana goavana Hankyu ao Kawaramachi, Shijo, any Kyoto.
Fa inona no hitan'i Illcomonz ao anatiny ao ary inona no valiny omeny ilay fanontaniana hoe ‘Inona no mamaritra hoe karazana olona toy inona isika ?’
Ity ny fanambarana momba ny maha-olombelona avy amin'i Illcommonz, ilay artista amin'izao vaninandro izao, mpanao fanadihadiana ary mpikatroka amin'ny sehatry ny haino aman-jery.
Inona ianao ? Sary an'ny Ripplet.jp ao amin'ny Flickr